ျပည့္ၿဖိဳ႕ေတာင့္တင္းလြန္းတဲ့အလွေတြနဲ႔ ျမင္သူတိုင္းေႂကြသြားေစမယ့္ ေမပန္းခ်ီရဲ႕ အမိုက္စားပုံရိပ္မ်ား – သုတရသ
သ႐ုပ္ေဆာင္ပို င္းမွာဆိုရင္လည္း အျပစ္ေျပာစရာ မရွိေအာင္ ေဆးစက္ က်ရာအ ႐ုပ္ထင္ေအာင္ အေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ပုံေဖာ္ႏိုင္ သူတစ္ေယာက္ လည္းျဖစ္ ပါတယ္ေနာ္။ အရမ္းမိုက္ တဲ့ ေကာ က္ေၾကာင္း အလွေတြကို ေပၚလြင္ေစ တဲ့ ဆက္ဆီ က်က် ဖက္ရွင္မ်ိဳးေလးေတြ ကိုမ်ားေသာ အားျဖင့္ဝတ္တတ္ တာေၾကာင့္ ပုရိသေတြ ရဲ႕
အာ႐ုံစိုက္ အားေပးမႈေတြကို ရရွိ ထား ခဲ့ပါ တယ္ေနာ္။ အမိုက္စား ခႏၲာကိုယ္ေ ကာက္ေၾကာင္း အလွေတြ ေပၚလြ င္ေနတဲ့ ဖက္ရွင္အမိ အမိုက္ေတြနဲ႔အတူ ” ခ္စၡဲ့ဖူးလား ? ေ်ဖပါ ” ဆိုတဲ့ စာ သားေ လး နဲ႔ပုံေတြကို တင္ လာခဲ့ တာပါ။ အရမ္းလန္းတဲ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ႕ ပုံေလးေတြကို ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ ေဝမွ်ေပး လိုက္ ပါတယ္ေနာ္။
ပရိတ်သတ် ကြီးရေ မေပန်းချီက တော့ အမိုက်စား ခန္တာကိုယ်ကောက် ကြောင်း အလှတွေ နဲ့ တည်ငြိမ်ရင့် ကျက်တဲ့ မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆို င်ထားတဲ့ သူမဟာ နာမည်ရ မင်းသမီးတွေ ထဲ က တစ်လ က်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။ ဗီဒီယို တွေခေ တ်စားခဲ့တဲ့ ကာလမှာ လည်း ပရိတ်သတ်တွေ တစ်ခဲနက် အားပေးမှု ဝန်းရံမှုတွေ ကိုရ ရှိခဲ့တာပါ။
သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် ဆေးစက် ကျရာအ ရုပ်ထင်အောင် အကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်ပုံဖော်နိုင် သူတစ်ယောက် လည်းဖြစ် ပါတယ်နော်။ အရမ်းမိုက် တဲ့ ကော က်ကြောင်း အလှတွေကို ပေါ်လွင်စေ တဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဖက်ရှင်မျိုးလေးတွေ ကိုများသော အားဖြင့်ဝတ်တတ် တာကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ အာရုံစိုက် အားပေးမှုတွေကို ရရှိ ထား ခဲ့ပါ တယ်နော်။
အမိုက်စား ခန္တာကိုယ်ေ ကာက်ကြောင်း အလှတွေ ပေါ်လွ င်နေတဲ့ ဖက်ရှင်အမိ အမိုက်တွေနဲ့အတူ ” ခ်စ္ခဲ့ဖူးလား ? ေျဖပါ ” ဆိုတဲ့ စာ သားေ လး နဲ့ပုံတွေကို တင် လာခဲ့ တာပါ။ အရမ်းလန်းတဲ့ မေပန်းချီ ရဲ့ ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီး အတွက် ဝေမျှပေး လိုက် ပါတယ်နော်။